Raharaha Liladar - Mahatsiaro te
Raharaha Liladar - Mahatsiaro tena ho voaloto i Manandafy
Mangataka fitsipahana avy amin’ny polisy i Manandafy Rakotonirina.
Ny ahiahy tsy hihavanana. Ny 20 oktobra teo no nisy nanafika ny fivarotana volamena iray tetsy Antaninarenina. Teratany vahiny iray no namoy ny ainy vokatry ny tifitra nataon'ireo mpanafika izay tsy mbola fantatra hatramin'izao.
Dimy andro taorian'izay, ny 25 oktobra dia tomefy mpitandro ny filaminana teny Ampefiloha ka nalaza tamin'izany fa “miahoaho eny amin'io toerana io ireo olona voarohirohy tamin'ny fandrobana sy famonoana Karana teny Antaninarenina”. Nivoaka an-gazety mihitsy moa fa “malaza fa mpiambina olona ambony iray eto amin'ny firenena no nahavita io zavatra io”.
Nanoloana izany dia niresaka ary nitaky tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray eto Antananarivo ny filoha nasionalin'ny antoko MFM no sady mpanolotsaina manokan'ny filohan'ny Repoblika, Manandafy Rakotonirina, ny tokony hanambarana ny anaran'ny mpanao politika mipetraka eny Ampefiloha ahiana ho nampiasa mpiambina namono sy nandroba ilay teratany vahiny teny Ambohijatovo - Antaninarenina.
Taorian'izany dia nisy gazety an-tsoratra indray namoaka hoe: “ahiahiana ny mpiambina an'i Manandafy”. Nahatsiaro ho voatohina tamin'izany ity filoha nasionalin'ny Antoko MFM ity ka nandefa taratasy tany amin'ny minisitry ny Filaminam-bahoaka. Nanambara izy tamin'izany fa “raisinay ho fandotoana ny fametrahana ahiahy toy izany ary fanaratsiana anay amin'ny tany ama-monina sy ny Karana... Miantoka tanteraka izahay fa ny mpiaro anay dia madio tanteraka... Sao voatifitifitra fahatany tsy manan-tsiny amin'izao fanelezana tsaho ataon'ny polisy amin'ny mpanao gazety izao ny mpiambina anay. Koa miangavy anao hampitsahatra izany fomba fiasa izany ary hanao fanitsiana ampahibemaso ho valin'ny tsilian-tsofina nataon'ny polisy lasa vaovao lehibe...”
Nanambara i Manandafy Rakotonirina fa ‘tsy manana ady atao amin'ny Karana ny MFM ary tsy mbola nanenjika azy ireo”.
Hita tamin'ny taratsy nalefan'ity filohan'ny antoko MFM ho an'ny minisitry ny Filaminam-bahoaka ity fa nandefasany dika mitovy ny filohan'ny Repoblika mba ho tatitra.
Express de Madagascar 07 11 2005